i-South Africa izoba ingxenye yomdlalo wokuqala we-World Cup 2019
“Njenge-South African, unethuba lokuba emlandweni njengomdlali wekhilikithi futhi wenze okungakazwe kwenziwe umdlali wekhilikithi,” kusho u-Chris Morris.
i-South Africa izodlala ne-England kumdlalo wokuqala we-ICC Cricket World Cup 2019 e-The Oval ngo-30 May - 14 July emuva kokuthi imidlalo yama-Proteas imenyezeliwe namhlanje.
i-South Africa yadlala ne-England enkundleni efanayo kumqhudelwano ngo-1999 futhi kulandela u-50 ka-Herschelle Gibbs no-4/17 ka-Allan Donald, basheshisa ngeqembu eliphethe umdlalo ngama-runs angu-122. Umdlalo kwaku owesithathu we-South Africa kwisixuku futhi kwabanikeza ukunqoba imidlalo emithathu kwimidlalo emithathu.
i-Australia, abayiphula kabili inhliziyo ye-South Africa kumqhudelwano ngo-1999 e-Headingley nase-Edgbaston, futhi kuzoba ithuba lokugcina lika-Faf du Plessis kule-single-league kumqhudelwano lamaqembu angu-10. i-Old Trafford izoba inkundlala yalomdlalo ngo-6 July, okuzophinde kube owesibili kanye newokugcina we-day/night kwe-South Africa.
Kwi-World Cup ka-1999, i-South Africa yadlala kahle futhi yahlula i-New Zealand e-Edgbaston. Kulesikhathi futhi, womabili amaqembu azohlangana enkundleni efanayo ngo-19 June futhi lokhu kuzoba umdlalo wesithupha we-South Africa we-league.
i-South Africa seyahlulwa i-Pakistan kwimidlalo emibili yokugcina kwimiqudelwano yama-over angu-50 e-Auckland (World Cup 2015) nase-Birmingham (ICC Champions Trophy 2017). Kumqhudelwano wonyaka ozayo, bazohlela ukuziphindiselela ngokuhlulwa ngokudlala nabaphethe isicoco se-Champions Trophy e-ord’s ngo-23 June.
Eminye imidlalo ye-South Africa kumqhudelwano izoba e-The Oval (bedlala ne-Bangladesh, 2 June), e-Hampshire Bowl (bedlala ne-India, 5 June; ne-Windies, 10 June), e-Cardiff Wales Stadium (bedlala ne-Afghanistan, 15 June) ne-The Riverside (bedlala ne-Sri Lanka, 28 June).
Ebheke kumqhudelwano wonyaka ozayo, i-all-rounder ye-South Africa u-Chris Morris uthe: “i-World Cup inkulu kumdlali, hayi abekhilikithi kuphela. Kuyinsika kumsebenzi womdlali.”
“Ukuzinika ithuba lokunqoba i-World Cup uyinqobele izwe lakho, uhambo oluhle lokuba ingxenye yalo. Akulona uhambo lezinyanga eziyizithupha kuphela, kodwa uhambo leminyaka emine kuyela kumqhudelwano.”
“Njengomuntu wase-South Africa, unethuba lokwakha umlando njengomdlali wekhilikithi futhi wenze okungakaze kwenziwe omunye umdlali wekhilikithi.”
u-Morris uthe umqhudelwano onyakeni ozayo uzoba umqhudelwano ovulekile eminyakeni edlulile futhi uzoncikela ekutheni amaqembu akhuphuka kanjani.
“Umqhudelwano we-World Cup ovulekile, kuzohambisana nokuthi imaphi amaqembu akhuphukayo ngesikhathi esihle, kodwa hlezi kukhona okuphoxayo kwi-World Cup futhi uyohlezi ukukhumbula,” kusho u-Morris, onama-runs angu-393 futhi wathatha ama-wicket angu-34 kuma-ODIs kuze kube yimanje.
Uphinde wathi: “Umdlali oyedwa angawuthatha umdlalo osukwini, kuzoba kuhle ukudlala namaqembu abadlali abangakaze badlale nabo futhi abadlali abasha abangakaze babonwe enkundleni enkulu, ngakho kuyajabulisa kulabo abazobe beyingxenye.”
CSA ne-SACA baphetha i-interim agreement i-Cricket South Africa imemezele amaqembu ama-Proteas women azodlala ne-Bangladesh i-CSA imemezelela imidlalo yasekhaya ye-season ka-2018/19 i-CSA ihlonipha u-Colin Bland i-CSA ne-SLC bamemezela uhlelo lama-Proteas lihambela e-Sri Lanka u-Philander uqede i-Australia ekuseni osukwini lokugcina i-CSA ihalalisela ama-Proteas ngokugubha umlando benqoba i-Test series bedlala ne-Australia u-Bavuma uhlelela ama-Proteas usuku olukhulu u-Markram ubekela ama-Proteas isikhonkwana ngaphambi kokuthi i-Australia iziphindiselele Ama-Proteas afuna ukumvalelisa kahle u-Morkel Ubuhlakane bukaMorne kuhola ukunqoba okukhulu kwama-Proteas nokuba